Anisan’ireny ny aretin’andoha, ny AVC, ny diabeta, ny fanintona mpahazo ny ankizy, ny tosidra izay nambaran’ny profesora Alain Tehindrazanarivelo sady ambasadaoron’ny vondrona Afrikanina fa vokatry ny sakafo sy ny tsy fahaizana mitaiza vatana avokoa amin’ny ankapobeny. Ho an’ny tosidra, vokatry ny fihinanana sira be loatra no mahatonga azy. Tokony handeha dia an-tongotra hanatanja-batana kosa ho an’ireo mararin’ny diabeta. Tena lafo dia lafo anefa ny fitsaboana ireo karazan’aretina tsy mifindra misy hifandraisany amin’ny atidoha ka mila mitandrina ny rehetra. Manampy trotraka izany ny tsy fahampian’ny mpitsabo momba ny loha aty Afrika. Neurologue iray misahana olona 4 tapitrisa aty Afrika raha manana 17 isa kosa isika eto Madagasikara miampy mpianatra miisa 10. Nivoitra ireo rehetra ireo nandritra ny fanokafana tamim-pomba ofisialy ilay kongresy ho enti-manatsara ny fandraisana an-tanana ny aretina tsy mifindra misy hifandraisany amin’ny atidoha teny amin’ny hotel Panorama Andrainarivo omaly. Mpianatra 50 aty Afrika misandrahaka amina firenena 15 isa no tonga mifanakalo traikefa mandritra izany hahafahana manampy sy manohana ireo mpitsabo eny ambanivohitra eto amintsika. Mbola betsaka mantsy ireo olana sedrain’ireny mpitsabo ireny eo am-panatanterahana ny asany ka mila tohana manokana izy ireny. Mahatratra 500 eo ny isan’ireo marary raisin’ireo mpitsabo an-tanana manampahaizana amin’izany ao anatin’ny telo andro, tranga misy eto amintsika. Tonga nanokatra ny hetsika teny an-toerana ny filoham-panjakana Rivo. Anisan’ny manohana akaiky ny hetsika ny orinasam-pifandraisana Airtel izay miantoka ny connexion hahafahana mampita ny vaovao rehetra manerana izao tontolo izao. Zava-dehibe amin’izy ireo loatra mantsy ny fiahiana ny fahasalamam-bahoaka tahaka izao.